Amatikiti | Go George
1. Libiza malini itikiti, kwaye ibalwa njani indleko?
Itikiti lokuya kuphela elingathengwanga bhasini elithengwe kubathengisi lixabisa i-R10 ngoku, kwaye itikiti elithengwe ebhasini lixabisa i-R12. Lo mehluko kwixabiso waphunyezwa ukuze ukhuthaze abahambi ngesithuthi ukuba bathenge amatikiti abo phambi kokukhwela ebhasini. Oku kuzakonga ixesha kwaye kwenze inkqubo ihlale exesheni elicwangcisiweyo. Amatikiti eehambo ezininzi (asemthethweni malunga neehambo ezili-10) axabisa ama-R90. Iibhasi ziya kuqhuba ngenkqubo yemali yoku-hamba esekelwe kumgama kwaye imali yokuhamba idibene nomvuzo ongowona mncinci womsebenzi wasekhaya njengoko umisiwe liSebe lezaBasebenzi. Ukubalwa kwemali yokuhamba kuthathela ingqalelo yokubanako komsebenzi wasekhaya wasedolophini (umvuzo ongowona mncinci) yokuba abe nokumelana nendleko yesithuthi sikawonke-wonke, esekelwe kwiinjongo zesizwe zokuba akufanelanga ukuba ibe ngaphezulu kwepersenti ethile yomvuzo wenyanga womntu imali echithwa kwezothutho. Zonke iindlela eziphunyeziweyo ukuza kuma ngoku zingena phakathi komgca womgama ongowona mfutshane we-(15 km) kwaye ngolo hlobo kuhlawuliswa i-R10 okanye i-R12 (ngaphandle kokuba itikiti leehambo ezininzi lithengiwe). Malunga neehambo ezinde kune-15 km, imali yokuhamba enyusiweyo ye-5 km iya kusebenza. Lo ngumrhumo ofumana inkxaso kurhulumente kwaye ayiyondleko yokwenyani yokuhamba, kwaye uya kuhlengahlengiswa ngomnyaka.
2. Ndilithenga njani itikiti? Kwaye ndingahlawulwa ngekhadi lokuhlawula ityala?
Amatikiti emali ehambo enye aya kuthengiswa kuyo nayiphina ibhasi yeGO GEORGE. Amatikiti eehambo ezininzi angathengwa kwiivenkile ezigunyazisiweyo ngexabiso elincitshisiweyo. Ungathenga itikiti elinye ebhasini ngemali kuphela. Nceda ube nesixa esiqingqekileyo xa uthenga itikiti ebhasini, oku kuya kuwenza lula umsebenzi womqhubi. Amatikiti ehambo enye aya fumaneka kwakubathengisi abathengisa itikiti leehambo ezininzi kwaye angathengwa ngekhadi lakho lokuhlawula ityala ukuba umthengisi uyawanikezela loo mancedo alolo hlobo. Ukuze ube nako ukuhamba ngebhasi, wonke umntu ohamba ngesithuthi udinga itikiti lakhe. Kukho izicwangciso zokuphumeza inkqubo yokuhlawula esekelwe kwikhadi kwixesha elizayo.
3. Ingaba abantwana bam bangahamba kunye nam kwitikiti lam?
Hayi, umntu ngamnye ohamba ngesithuthi udinga itikiti lakhe. Ukuba umntwana wakho uneminyaka emine okanye ngaphezulu, uya kudinga itikiti lakhe.
4. Yintoni itikiti leehambo ezininzi?
Itikiti leehambo ezininzi leGO GEORGE elitshiphu kunye nelincedayo lithengiswa kubathengisi bamatikiti abab-halisiweyo kuyo yonke idolophu kunye nakubathengisi abahambahambayo. Eli tikiti lixabisa ama-R90 ngoku kwaye lisemthethweni malunga neehambo zebhasi ezili-10 (phakathi kweentsuku ezingama-30 ukususela kumhla wokwenziwa kwalo ukuba lisebenze kokuqala, kwaye malunga neyure enye emva kokwenziwa lisebenze phakathi komjikelo we-15 km) Oku kukonga kwama-R1 ngohambo, xa kuthelekiswa netikiti lehambo yokuya kuphela elix-abisa i-R10 xa lingathengwanga ebhasini, kunye ne-R3 xa kuthelekiswa netikiti lokuya kuphela elithengwe ebhasini (R12, ngemali kuphela).Uncedo olungaphezulu lwetikiti leehambo ezininzi kukuba uthenga kanye malunga nexesha elide, akukho sidingo sokuba ujikeleze uphethe imali, kwaye likhawulezisa inkqubo yokukhwela ebhasini.